နှစ်ပါတ်အတွင်း အသားကိုဖြူလာစေမယ့် နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရေချိုးဆပ်ပြာရည်လေး | CosmeticMyanmar
Home » Article » နှစ်ပါတ်အတွင်း အသားကိုဖြူလာစေမယ့် နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရေချိုးဆပ်ပြာရည်လေး
အသားဖြုဝင်းချင်ကြတာကတော့ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပါ။ အသားဖြူဖြူလေးတွေက ဘယ်လိုလေးပဲဝတ်တတ်လိုက်ဖက်မှုရှိပြီးတော့ အများကြားထဲမှာလည်ထင်းနေစေပါတယ်။ မိတ်ကပ်သိပ်မပြင်ရင်လည်းလှနေတော့ ကောင်မလေးတိုင်းဖြူချင်ကြတာမဆန်းတော့ပါဘူးလေ။ အဲ့တော့ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးစမ်းသုံးကြည့်လိုက် သူများကောင်းတယ်ပြောရင်လိုက်ဝယ်လိုက်နဲ့ သံသရာလည်နေတာပေါ့။ တစ်ချို့ပစ္စည်းတွေကတော့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စျေးကမကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ တစ်လတစ်လကိုဒါကြီးပဲဝယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးလက်လျှော့လိုက်, စျေးသင့်တင့်တာတွေကြတော့လည်း အရည်အသွေးကမကောင်းတော့ မသိသာ။ စိတ်ကုန်လာတာပေါ့။ စိတ်မပူပါနဲ့ မင်မင်စျေးလည်းသင့်တင့်ရမယ် အရည်အသွေးလည်းကောင်းရမယ်။ ဘာလိုသေးလဲ?
အဲ့ပစ္စည်းကောင်းလေးကတော့ shower cream လေးပါ။ ရေချိုးတာကနေအသားဖြူပါ့မလား မင်မင်ရယ်? ဂျင်းမထည့်ပါနဲ့လို့ပြောတော့မယ်ဆိုတာသိနေပါတယ်နော်။ အသားကိုဖြူစေတယ်ဆိုတာက တရုတ်မလေးတွေလိုဖွေးဆွတ်ပြီးတော့ မဖြူနိုင်ပါဘူးနော်။ ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်အသားရေထက်ကိုကြည်ပြီးတော့ဝင်းလာစေတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အမဲစက်တွေအသားရေမညီညာတာတွေကလည်း အသားရေကို ညိုသလို ဖြစ်နေစေပါတယ်။ အခုဒီပစ္စည်းလေးကတော့ သုံးပြီးတာနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအပြည့်အဝပေးမှာပါ။ Intro တွေများနေပြီဆိုတော့ သူလေးကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတော့မယ်နော်။
Follow me ကထုတ်တဲ့ silkbath shower cream လေးပါ။ အမျိုးအစား ၃ မျိုးထုတ်ထားပါတယ်။ အစိမ်းရောင်, ပန်းရောင်လေးရယ်, ခရမ်းရောင်လေးရယ်ပါ။ ၃ မျိုးလုံးကတော့တစ်မျိုးစီ အာနိသင်တွေပေးပါတယ်။ တစ်မျိုးချင်းစီကိုသေချာလေးပြောပြပေးမယ်နော်။
ပန်းရောင်လေးကတော့ Ultra Nourish ပါဝင်တဲ့အတွက် အသားရေအတွက်လိုအပ်တဲ့အစိုဓါတ်ကိုဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားရေကို လက်သည်းလေးနဲ့ခြစ်ကြည့်လိုက်လို့ အဖြူစင်းရာထင်တယ်ဆိုရင် သေချာပါတယ်။ အသားရေကခြောက်နေပါပြီ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီပန်းရောင်လေးကို သုံးလိုက်ပါ၊ သူ့ကိုသုံးပြီးတာနဲ့ အသားရေလေးကစိုအိပြီးတော့ နူးညံ့သွားစေပါတယ်။ Crustal အမှုန်လေးတွေတော့ဒီပန်းရောင်ဘူးလေးမှာပဲပါဝင်ပါတယ်နော်။ ရေမွှေးသုံးထားသလို တစ်နေကုန်လည်း မွှေးကြိုင်နေစေပါတယ်။
Anit-bacteria က sensitive အသားရေအတွက်တော့ ကွက်တိပါပဲ။ ဘာသုံးသုံးမတည့်လို့ အနီစက်တွေထွက် အသားတွေယားဆိုရင်တော့ ဒီအစိမ်းရောင်ဘူးလေးကို သုံးလိုက်တော့နော်။ အသားရေမှာရှိတဲ့ ပိုးတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးတော့ ပင်လယ်ရေမှော်နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်လို့ သုံးပြီးတာနဲ့ အေးမြပြီး နေလို့ကောင်းစေပါတယ်။
Hot နေတဲ့ အရောင်လေးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်။ အသားဖြူတယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့ shower cream လေးပါ။ Extra light လို့ပြောထားတဲ့သူလေးကတော့ vitamin B3 ပါဝင်လို့ပါ။ Vitamin B3 ကတော့ အသားရေကို ဝင်းလက်ဖြူစင်စေတဲ့နေရာမှာပြိုင်စံရှားပါ။ ညစ်နွမ်းနေတဲ့အသားရေကိုပြန်လည်ဝင်းပစေပါတယ်။ ဖြူစင်ဝင်းပမှုကို နှစ်ပါတ်အတွင်းမြင်ရမှာပါနော်။
စျေးတွေကတော့ 200 ml ကို မြန်မာကျပ်ငွေ 4200 , 750 ml ကို မြန်မာငွေ 11050 ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်နော်။ ဘူးသေးလေးဆိုပြီး အထင်မသေးနဲ့နော်။ တစ်ခါသုံးရင်နည်းနည်းလေးထည့်တာနဲ့ အမြှပ်တွေအများကြီးထွက်တာ ပြီးတော့ ဘူးသေးလေးတောင် အလေးကြီးပဲ ဟိဟိ။ တစ်ယောက်တည်းသုံးမယ်ဆိုရင်တောင် ၂ လကျော်လောက်သုံးရမယ်ထင်တယ်။ ဘူးကြီးကတော့ အတန်ဆုံးပေါ့။ စမ်းသုံးချင်သူလေးတွေကတော့ ဘူးသေးလေးအရင်သုံးကြည့်။
ရေချိုး shower တွေ သုံးတဲ့အခါ sponge လိုမျိုးရေမြှပ်လေးတွေနဲ့တိုက်ပေးပါ။ ဆပ်ပြာရည်ကြီးကိုပဲတိုက်နေရင်တော့အနံ့မွှေးတာပဲရှိမယ်နော်။ ကြေးတွေပြောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါလေးကသုံးပြီးရင်လည်း အသားကိုချွဲကျိကျိကြီးဖြစ်မနေပဲ အိအိလေးဖြစ်သွားစေပြီးတော့ အနံ့လေးကလည်း သင်းသင်းလေးနဲ့ တော်တာ်ကိုပေးရတဲ့စျေးနဲ့တန်လွန်းလှပါတယ်နော်။
Follow Me ကောင်တာတိုင်း, city mart , အလှကုန်ဆိုင်တိုင်းမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်နော်။ ခရမ်းလေးကတော့ အမြဲတမ်း ပြတ်ပြတ်နေလို့ မြန်မြန်လေးတော့ သွားဝယ်လိုက်နော်။
အချစ်တို့ကို အလှကြီး လှစေချင်တဲ့စေတနာတွေနဲ့ ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်နော်။